Abbiy Axmed oo ka hadlay Duullaankii u dambeeyay ee ay qaadayaan | Berberanews.com
Home WARARKA Abbiy Axmed oo ka hadlay Duullaankii u dambeeyay ee ay qaadayaan
Tigray-(Berberanews)-Milatariga Itoobiya ayaa bilaabi doona “wejigii ugu dambeeyay” ee duulaanka ay ku qaadayaan waqooyiga gobolka Tigreega, Ra’iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay saacado kadib markii uu dhamaaday waqtigii loogu talagalay in ciidamada Tigreegu ay isku soo dhiibaan.
“Muddadii 72-ka saac ahayd ee la siiyay kooxdii dambiilayaasha ahayd ee TPLF inay si nabad galyo ah isku dhiibaan hada way dhamaatay ololaheena sharci fulinta ayaa gaadhay heerkiisii ​​ugu dambeeyay,” ayuu ku soo qoray Twitter khamiistii maanya, isaga oo ula jeeday Jabhadda Xoreynta Dadka ee Tigreega (TPLF).
Abiy ayaa sheegay in ciidanka lagu amray inay u dhaqaaqaan caasimada Tigrayan ee dhibaatada ka taagan tahay ee Mekelle, wuxuuna uga digay dadka deegaanka inay “guryaha iska joogaan”.
Hadalka ka soo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa ka dhigan taangiyo iyo hub kale oo ay hadda ku dhowaan karaan magaalada ay ku nool yihiin nus malyuun qof. “Waxaan si taxaddar leh u ilaalin doonnaa sidii aan u difaaci lahayn dadka rayidka ah,” ayaa lagu yidhi.
Raiisel wasaare Abiy wuxuu yidhi “kumanaan dagaalyahanada Tigreega ah ayaa isa soo dhiibay seddexdii maalmood ee ugu dambeysay.”
Laakiin hadalladii ugu dambeeyay ee hoggaanka TPLF ayaa beeniyay sheegashadaas.
“Ciidamada dowladdu waxay kaloo sheegeen inay hareereeyeen magaalada Mekelle. Mar labaad, hoggaanka militariga ee Tigray ayaa beeniyay sheegashadaas. ”
Ilaa hadda suurta gal naaha in la xaqiijiyo sheegashooyinka dhinacyada oo dhan maxaa yeelay telefoonada iyo khadka internetka ee gobolka ayaa go’an, iyadoo marinka aaggama si adag loo xakameeyay.
Previous articleCIA officer killed in combat in Somalia
Next articleAbbiy Ahmed asks Makelle residents to “stay indoors” for final Operation